Nangatumpag - Cebuano - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: nangatumpag (Cebuano - Burmesiska)
Ginapalinog mo ang yuta; ginagisi mo kini: Ayoha ang mga nangatumpag niini; kay nagakurog siya.
မြေကြီးကို လှုပ်၍ ခွဲတော်မူပြီ။ ကွဲအက်ရာတို့ကို တဖန် စေ့စပ်စေတော်မူပါ။ တုန်လှုပ်လျက် ရှိပါသေး၏။
ယေရိခေါမြို့ကို ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဝိုင်း၍ လှည့်ပြီးမှ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မြို့ရိုးသည် ပြိုလဲ၏။
ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် နောက်တဖန် လူများ လှူသောငွေကို မခံရ။ ဗိမာန်တော်ပြိုပျက်ရာကိုလည်း မပြုပြင်ရဟုဝန်ခံကြ၏။
သို့သော်လည်း ယောရှမင်းကြီးနန်းစံနှစ်ဆယ် သုံးနှစ်တွင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် ဗိမာန်တော်ပြိုပျက် ရာတို့ကို မပြုပြင်ကြသေး။
ဗိမာန်တော်အုပ်၊ အမှုတော်စောင့်တို့၌အပ်၍၊ ဗိမာန်တော်ပြိုပျက်ရာကို ပြုပြင်ခြင်းငှါ လုပ်ဆောင်သော သူ၊
ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည် မိမိတို့အသိအကျွမ်း လှူသည်အတိုင်း ခံယူ၍၊ ဗိမာန်တော်ပြိုပျက်ရာရှိသမျှ တို့ကို ပြုပြင်ကြစေဟု ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အား မိန့်တော် မူ၏။
Ug sila nga mahaanha kanimo mopatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan; ikaw mopatindog sa mga patukoranan sa daghanan nga mga kaliwatan; ug ikaw pagatawgon: Ang mag-aayo sa nangatumpag, Ang mag-uuli sa mga alagianan aron pagapuy-an.
သင်၏အမျိုးအနွယ်သည် ရှေးပြိုပျက်ရာတို့ကို ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်။ ရှေးကာလ၌တည်ဘူးသော တိုက်မြစ် များအပေါ်မှာ ထပ်ဆင့်၍ တည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်း၊ ပြိုပျက်သော မြို့ရိုးကို ပြုပြင်သောသူ၊ လူနေရာလမ်းများကို ပြင်ဆင်သော သူဟူ၍ သမုတ်ခြင်း ကို ခံရလိမ့်မည်။
Apan nahitabo nga, sa pagkadungog ni Sanballat, ug ni Tobias, ug sa mga Arabiahanon, ug sa mga Ammonhanon, ug sa mga Asdodnon, nga ang pag-ayo sa mga kuta sa Jerusalem nagapadayon, ug nga gisugdan na ang paghulip sa mga nangatumpag, unya sila nangasuko sa hilabihan;
ယေရုရှလင်မြို့ရိုးမြင့်၍ ပြိုပျက်ရာတို့ကို ပြင်စ ပြုကြသည်ဟု သမ္ဘာလတ်နှင့် တောဘိအစရှိသော အာရပ်လူ၊ အမ္မုန်လူ၊ အာဇုတ်လူတို့သည် ကြားသော အခါ၊ အလွန်ဒေါသစိတ်ရှိသဖြင့်၊
ပန်းရန်သမား၊ ကျောက်ဆစ်သမားတို့အတွက် ဗိမာန်တော် ပြိုပျက်ရာကို ပြုပြင်စရာကျောက်နှင့် သစ်သားကိုဝယ်၍ ကုန်သမျှသော အတွက်ပေးဝေကြ၏။
ထိုအခါ ယောရှမင်းကြီးသည် ယဇ်ပုရောဟိတ် ယောယဒ နှင့်အခြားသော ယဇ်ပုရောဟိတ် တို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည် ဗိမာန်တော်ပြိုပျက်ရာတို့ကို အဘယ်ကြောင့် မပြုပြင်ဘဲ နေကြသနည်း။ နောက်တဖန် အသိအကျွမ်းလှူသော ငွေကိုကိုယ်တိုင် မယူကြနှင့်။ ဗိမာန်တော်ပြိုပျက်ရာတို့ကို ပြုပြင်ဘို့ရာအပ်ကြလော့ဟု ဆိုသည်အတိုင်း၊
bhagvan unki atma ko shanti mile (Hindi>Engelska)redi (Latin>Italienska)longtail bend (Engelska>Italienska)contusio (Latin>Engelska)pusat (Malajiska>Kinesiska (förenklad))wala na tapos na (Tagalog>Cebuano)chạy chữa (Vietnamesiska>Indonesiska)bump (Engelska>Italienska)ergo (Latin>Wolof)meaning kha se ho aap (Hindi>Engelska)nicolas courtois: (Engelska>Ryska)comprimés (Italienska>Lettiska)nhòm nom (Vietnamesiska>Japanska)заместник (Ryska>Rumänska)ad regnum dei (Latin>Spanska)please for god sake stop making my life difficult (Engelska>Hindi)endurecibles (Spanska>Engelska)ka pai to mahi to pēpē kōtiro (Maori>Engelska)motacilla (Latin>Italienska)mythology (Engelska>Hebreiska)tu es de quel pays bb (Franska>Engelska)mga maikling dasal bago mag umpisa ang klase (Tagalog>Engelska)i don't get your question (Engelska>Tamil)täysimääräiseen (Finska>Rumänska)bacterium (Latin>Engelska)